ग्रीन हस्पिटल वेष्ट मेनेजमेन्ट सेन्टर संचालनमा केही दिन लाग्ने , विधिवत रिवन काट्ने काम सकियो
माघ १५, २०७८
पर्सागढीमा किसानको बजेटमा मेयर र अधिकृतको रजाई, अनियमितताका लागि म्याद गुज्रेको आहार वितरण
परिवारको सपोर्ट लिएर काम गर्दा असफल हुने कुरा हुन्न : अग्रवाल
दशकौ बित्दा बेचेको जग्गा नामसारी गरेनन् संजय रौनियार, दरोगा परिवार बिच्चलीमा
नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख, महिला बढी, मधेश प्रदेशमा २१ प्रतिशत जनताको बसोबास
देशभरका भन्सार कार्यालयमा आजदेखि अनलाइन प्रणाली लागू
सम्पादकीय- जन्मदै रोगी ‘राजधानी’ निरोगी हुनेमा शंका
स्थानीय तह निर्वाचनको मिति यथाशीघ्र तोक्न आयोगको आग्रह
पुग्यो साढे १६ लाख बढी मात्रा मोडर्ना खोप
‘जी ले जरा’बाट पछि हटिन प्रियंका, तनावमा निर्माता
पुष ५, २०७८ मध्य नेपाल संवाददाता
वीरगन्ज महानगरपालिकाले विधिवत उद्घाटन गरेको ‘ग्रीन हस्पिटल वेष्ट मेनेजमेन्ट सेन्टर’ औपचारिक सञ्चालनमा भने अझै केही दिन लाग्ने भएको छ । आवश्यक जनशक्ति र प्राविधिकको अभावमा वीरगन्जका अस्पतालहरुबाट निस्केको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने केन्द्र सञ्चालनमा भने अझै केही दिन विलम्भ हुने भएको हो ।
यो सेन्टरको औपचारिक उद्घाटन भने गएको सोमबार वीरगन्ज महानगरपालिकाले गरिसकेको छ । कुल ६ करोड २२ लाख ७७ हजार ९ सय ८१ रुपैयाँमा निर्माण गरिएको सेन्टरको वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीले रिवन काटी विधिवत उद्घाटन गरिसकेका छन् । वीरगन्ज महानगरपालिकाका लागि फोहोर व्यवस्थापन नै प्रमुख चुनौतिहरु मध्ये एक रहेको समयमा यहाँका अस्पतालहरुबाट निस्कने फोहोरको व्यवस्थापन त्यतिकै चुनौति थियो । यो चुनौतिलाई सहज हल गर्न महानगरले चालेको कदम सह्रानीय रहेको अस्पताल संचालकहरुले पनि बताए । तर उनीहरुको तर्फबाट सकारात्मक सहयोग नभए योजना निर्माण हुनु र उद्घाटन हुनुले मात्र खासै अर्थ नराख्ने स्थानीयको तर्क छ ।
गएको असार १५ गते नै निर्माण सम्पन्न भएर बल्ल संचालनको लागि रिवन काटिएको फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रको उचित कार्य सम्पादन हुनु पर्ने स्थानीय राम प्रवेश साहले बताए । वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख सरावगीले पनि केही दिन भित्रमा नै सेन्टरको सञ्चालनका लागि बैठक बसी किनारा लगाउने बताए । हाललाई फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ल्याण्डफिल्ड साइड हेर्ने ठेकदारलाई नै संचालनको लागि दिने र पछि प्रक्रियागत रुपमा टेन्डर आवहान गरी ठेक्का मार्फत काम अगाडी बढाउने उनको भनाइ छ । नियमित सञ्चालनका लागि पिपीपी मोडलमा जाने र कुनै नीजि क्षेत्रलाई दिने बारे नै महानगरले सोचेको महानगरको योजना शाखाका इन्जिनियर प्रकाश अधिकारीले पनि बताए ।
वीरगन्जका दुई दर्जनभन्दा बढी अस्पताल र दर्जनौं क्लिनिकबाट निस्किने फोहोर उक्त केन्द्रमा व्यवस्थापन गरिने बताई सेन्टरमा दुई वटा ‘अटो क्लेव’ तयारी अवस्थामा राखिएको छ । सेन्टरमा जडान गरिएका अत्याधुनिक अटो क्लेव नेपालकै सबैभन्दा ठूलो साइजको भएको सो जडान गर्ने कम्पनी अमृत जलुकेनी जेभीका प्रतिनीधि नवराज खड्काले बताए । अटो क्लेबको एउटाको साइज ३५१ लिटर क्षमताको रहेको उनको भनाइ छ ।
त्यसै गरी एकै दिन ४ टन फोहोर प्रशोधन गर्न सक्ने २१ किलोको वासिङ मेसिन पनि सेन्टरमा जडान गरिएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले जनाएको छ । भविष्यलाई पनि लक्षित गरी थप फोहोर उत्सर्जन भए त्यसलाई स्टोर गरी पुनः व्यवस्थापन गर्ने पूर्वाधारसहितको सेन्टर बनाइएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निश्चलराज पाण्डेले पनि बताए । नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट वीरेन्द्र प्रधानले यस क्षेत्रका अस्पतालहरुबाट निस्किएका फोहोर व्यवस्थापनमा गर्ने सेन्टर संचालनमा आउनु राम्रो पक्ष भएको तर्क गरे ।
२०७७ मंसिर २५ गते सम्झौता भई गत असार १५ मा निर्माण सम्पन्न भएको सेन्टरको सञ्चालनमा विलम्भ नभए हुने थिने चिकित्सकहरुको भनाइ छ । फोहोरमा पनि अस्पतालबाट निस्कने फोहोर निकै खतरनाक हुने भएकोले यसको व्यवस्थापनमा अस्पतालहरुले पनि सकारात्मक सहयोग गर्नु पर्नेमा स्थानीय बुद्धिजीबीहरुको सुझाव छ । यो सेन्टरका लागि विलम्ब नगरिने वीरगन्ज महानगरपालिकाका अर्का इन्जिनियर राकेश साहले पनि बताए । यसको संचालनका लागि पनि पीपिपी मोडलमा जाने महानगरको तयारी रहेको उनले पनि बताए । हस्पिटलको फोहोर कतिपय हस्पिटल आफैले केहस् आफै पनि व्यवस्थापन गरिरहेको छन् । बाँकी मेडिकल वेस्टेजहरु मनिसको स्वास्थ्य र वातावरणका लागि हानिकार नहुने गरी उठाएर महानगरले पनि व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । अब भने अझ व्यवस्थित रुपले व्यवस्थापन हुने वीरगन्ज महानगरपालिकाको सरसफाई महाशाखा प्रमुख सफूद्दिन मियाँले बताए ।
वीरगन्ज महानगरमा दर्ता भएका अस्पताल, पोलिक्लिनिक, डायग्नोष्टिक सेन्टर, एक्स रे, अल्ट्रासाउन्ड र फिजियोथेरापी गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको संख्या १ सय ७४ वटा छ । त्यस बाहेक वीरगञ्जमा ३ सय ५० को हाराहारीमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा रहेको अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ । ती अस्पताल, पोलिक्लिनिक लगायत स्वास्थ्य संस्थाबाट दैनिक ४ दशमलव ७ मेट्रिक टन अस्पतालजन्य फोहोर निस्कने गरेको पनि अनुमान छ सरसफाई महाशाखा प्रमुख मियाँले भने । त्यसमा १ दशमलव ७ मेट्रिक टन टक्सिक (अति संक्रामक) फोहोर निस्किने गरेको अध्ययनले देखाएको वीरगन्ज महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य संस्थाबाट निष्कने फोहोरलाई संक्रमित र असंक्रमित गरी दुई भागमा छुट्याउने गरिन्छ । संक्रमित फोहोर अटोक्लेव मेसिनमा राखेर निर्मलीकरण गरी किटाणु रहित भएपछि अरु फोहरमा मिसाइ ल्याण्डफिल साइटमा पठाउने दायित्व स्वास्थ्य संस्थाहरूको हुन्छ । तर वीरगन्जका स्वास्थ्य संस्थाले त्यसो नगरिदिंदा समस्या हुने गरेको वीरगञ्जको फोहोर संकलन तथा प्रशोधनको काम गर्दै आएको पृथ्वी तारा÷एनके इन्टरनेशनल जेभीका निर्देशक शिवजी गुप्ताले बताए ।
‘अस्पतालजन्य फोहोर ट्याक्टरबाट छुट्टै संकलन गर्छौं । दुई टनको हाराहारीमा संकलन हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर संक्रामक र सामान्य फोहोर भनी छुट्टाइएको हुँदैन । सबै मिसिएर आउने गरेको छ ।’ त्यसरी फोहोर पठाउँदा व्यवस्थापन गर्न निकै कठिनाइ हुने गरेको उनको तर्क छ ।
सोमवार, पुष ५, २०७८, ०१:१२:००
श्रम कार्यालयका प्रमुख साह हुलास स्टीलको दलालीमा, अदालतको फैसला कार्यन्वयन नगराई मजदुरलाई हैरान गराउँदै
लागुऔषध गाँजासहित श्रीमान्-श्रीमती पक्राउ
माघ ९, २०७८ मध्य नेपाल संवाददाता
संक्रमित घटे, १७ हजार वटा नमुना परीक्षण हुँदा ६ हजार ४६२ जनामा कोरोना पुष्टि
पर्सागढीमा किसानको बजेटमा मेयर र अधिकृतको रजाई, अनियमितताका लागि म्याद गुज्रेको आहार वितरण माघ १४, २०७८
विपद् व्यवस्थापनको तयारी के हुँदै छ ? यस्तो भन्छन् सरोकारवाला ! सन्ध्या पौडेल
महिला हिंसा न्यूनिकरण गर्न के हुनु पर्छ ? यस्तो भन्छन् सरोकारवाला ! सन्ध्या पौडेल
परिवारको सपोर्ट लिएर काम गर्दा असफल हुने कुरा हुन्न : अग्रवाल माघ १२, २०७८
बाथ रोगको शीघ्र पहिचान नै बच्ने मुख्य उपाय : डा झा माघ ५, २०७८
वर्तमान जीवनशैली हरेक उमेर समूहको ढाड दुखाइको कारण माघ ४, २०७८
पर्सामा एकैदिन दुई बालबालिकाको शव फेला, बालिकाको हत्यामा परिवारिक स्रोतबाटै अनुसन्धान सुरु
प्रेस चाैतारी नेपालकाे जिल्ला अध्यक्षमा श्याम बन्जारा सर्वसम्मतले चयन
सामाजिक संजालको प्रयोग के का लागि ?
© मध्य नेपाल मिडिया प्रालि - 2022 All rights reserved.